Man United oo gaartay wareega 32-da tartanka Europa League kaddib markii ay ka adkaatay kooxda Partizan Beogra…+ SAWIRRO – Gool FM
(Manchester) 08 Nof 2019. Manchester United ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Partizan Beograd oo marti ugu aheyd garoonkeeda Old Trafford, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, kulankooda afaraad wareega group-yada ee Europa League, waxayna u gudubtay wareega xiga ee 32-da ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 2-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Manchester United.
Daqiiqadii 22-aad Manchester United ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay xiddigooda da’ada yar ee Mason Greenwood, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Marcus Rashford.
33 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd Manchester United ayaa heshay goolkeeda labaad waxaana 2-0 ka dhigay weeraryahanka reer France ee Anthony Martial.
49 Manchester United ayaa hogaanka sii dheereysaty waxaana 3-0 ciyaarta ka dhigay Marcus Rashford, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Ashley Young.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-0 oo ay Manchester United ugu awood sheegatay kooxda Partizan Beograd oo marti ugu aheyd garoonka Old Trafford, waxayna iska xaadiriyeen wareega 32-da ee tartanka Europa League